त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जागरण जरुरी : RajdhaniDaily.com - त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जागरण जरुरी
Home बिचार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जागरण जरुरी
नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले आलोचनाको केन्द्रमा रहेको छ । यस मातहतका क्याम्पस तथा निकाय पनि टीकाटिप्पणी र आलोचनाको विषय बन्न पुगेका छन् । सबैभन्दा पुरानो र सबैको गुरु भएका कारणले पनि यो आफैमा अब्बल हुनु जरुरी थियो । अहिले देशमा निजी विश्वविद्यालय छ्याप्छयाप्ती खुल्दा यसले आफ्नो विगत र विरासतको अब्बल रूपमा रक्षा गर्नु जरुरी थियो । त्यसो हुन सकिरहेको देखिँदैन । विशाल र भव्य पूर्वाधारसहित देशव्यापी झांगिन पुगेको यो विश्वविद्यालय प्राणबिनाको शरीरमा रूपान्तरतण त हुँदै छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । देशभरका मेधावी विद्यार्थी तथा खोज अनुसन्धानकर्ता र जानी तथा विद्वत्वर्गको केन्द्र बनिरहेको त्रिवि अबका दिनमा गम्भीर आलोचनाको विषय बन्नु आफैंमा लज्जाको विषय हो । यसको शैक्षिक तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि आन्तरिक प्रशासन जीवितै छ । भीसी कार्यरत रहेकै छन् । हरेक विषय र विभागका डीनहरू पनि बर्करार नियुक्ति पाएर बसिरहेकै छन् । तर, कमजोरी के कुरामा रह्यो र आज त्रिवि आलोचनाको केन्द्रमा रहन पुगेको छ ? गम्भीर आत्मसमीक्षा हुन जरुरी छ ।
यो गम्भीर विषय बनिरहेको छ । आलोचनाको प्रमुख कारण हो, यसले विद्यार्थीलाई परिवर्तित परिस्थितिअनुसार अध्ययन अध्यापन गराउन सकिरहेको छैन । शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सकिरहेको छैन । ज्ञान र खोजको भोक जागृत गर्न र नयाँ नयाँ कुराको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न गराउन सकिरहेको छैन । यसले बदलिँदो समयलाई सम्बोधन गर्न र भविष्यलाई आशा र सिर्जनातिर डो-याउन सकिरहेको छैन । बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ यसमा कार्यरत कार्मचारीका लागि खर्च गरिए पनि तदनुरूपको उपलब्धि यसले देखाउन सकिरहेको छैन । देशभरका विद्यार्थीको आशा र आकर्षण यस संस्थाप्रति हुन सकिरहेको छैन । बरु विकर्षण बढिरहेको छ । देशको मुहार बदल्ने शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको केन्द्रीय विश्वविद्यालय यस्तो रुग्ण अवस्थामा रहनु देशका लागि शुभ कुरा हुँदै होइन । एउटा चिनियाँ उखान छ– ‘एक वर्ष बाँच्नुछ भने धान रोप, १० वर्ष बाँच्नुछ भने रुख रोप र यदि सय वर्ष बाँच्नुछ भने शिक्षा रोप ।’ शिक्षा व्यक्तिको सय वर्षे जीवनका लागि हो । समाज रूपान्तरणका लागि हो । देशको मुहार परिवर्तनका लागि हो । त्यसैले पनि त्रिविको रुग्णताको नकारात्मक असर आगामी सयौं तथा हजारौं वर्षसम्म हुने स्पष्ट छ ।
त्रिवि र यस मातहतका शैक्षिक संस्थाहरूमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापकहरू कार्यरत छन् । सरकारले विनियोजित गरेको बजेट यी संस्थामा पुग्ने गरेको छ । यहाँ रहेका ल्याबहरू पनि जस्ताका तस्तै छन् । कसैको पनि सेवा सुविधामा कटौती गरिएको छैन । तर, पनि यहाँ चाहिनेभन्दा बढी राजनीति गरिएको छ । जुन पार्टीको सरकार आउँछ, त्यसैको भीसी त्रिविमा नियुक्त हुनुपर्ने परम्पराले यो प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यकर्ता पाल्ने थलो त हुँदै छैन भन्ने प्रश्न नउठेको पनि होइन । तर, यसको निवारण कुन विश्वास र परिपाटीमा हुने भन्ने कुराको टुंगो नै छैन । सरकार जसको आओस् वा जाओस् तर त्रिविमा शैक्षिक जागरण जरुरी छ ।
Breaking News राजधानी संवाददाता - February 20, 2021 0
राजधानी समाचारदाता - January 8, 2021 0
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज कैलालीको धनगढीमा आयोजना हुने जनसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । प्रतिनिधिसभा विघटन...
जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा आइसोलेसन कक्ष
प्रदेश नरेन्द्र कार्की - March 13, 2020 0
दार्चुला। जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा दुई बेडको आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरिएको छ । कोरोनाको विश्वव्यापी संक्रमण बढिरहेका बेला शंकास्पद लक्षण भएका बिरामीका लागि आइसोलेसन कक्ष...
प्रदेश ३ रासस - September 1, 2020 0
काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्षमा दिवंगत पितृका नाममा गरिने सोह्र श्राद्धका लागि आवश्यक पर्ने अपराह्नकालको समय निर्धारण गरिएको छ । धर्मशास्त्रका विभिन्न...
रेड वाइनमा पल र साम्राज्ञी अनुबन्धित
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - September 22, 2020 0
काठमाडौं । अभिनेता पल शाह र अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई एउटै चलचित्रमा देख्न पाइने भएको छ । यी दुवै अभिनेता अभिनेत्री नयाँ चलचित्र रेड...
प्रदेश १ रासस - July 7, 2020 0
खोटाङ । गाडीबाट झार्ने क्रममा मार्बलले किचेर गम्भीर घाइते बनेका दुई कामदारको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा बिच्छ्याउन गाडीमा ल्याइएको...
बहुला कुकुरले टोकेको गाई, भैंसी र खसी मर्न थाले
प्रदेश २ रमेश तिमलसिना - June 26, 2020 0
रौतहट । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वाड नं. २ जुडिबेलामा रेविज रोगेको बहुला कुकुरले टोकेको कारण बस्तुभाउ मर्न थालेका छन् । २८ दिनअघि बहुलाहा कुकुरको...
Editor-Picks महेश्वर गौतम - February 25, 2021 0
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - February 21, 2021 0
विश्वभर कोभिड–१९ विरूद्धको २० करोड खोप प्रयोग, खोपको अत्यधिक परिणाम धनी राष्ट्रमा